Taariikhdii Sheekh Maxamed-Rashaad | Somali Wiki
Home / Aqoonyahan / Taariikhdii Sheekh Maxamed-Rashaad
Posted by: somaliwi in Aqoonyahan, Diinta, Uncategorized January 29, 2017	Comments Off on Taariikhdii Sheekh Maxamed-Rashaad 1,618 Views
Taariikhda Sheekh Maxamed-Rashaad waxaa ka sheekeynaya Sheekh Axmed Daahir Aweys oo ay qaraabo iyo arday wada ahaayeen Sheekh Maxamed-Rashaad.
Sheekh Maxamed wuxuu dhashay 1950-meeyadii, qiyaastii 1955tii. Wuxuu ahaa nin aad u fahmo badan oo casharka ka soo baxa inta uu looxu qoyan yahay. Wuxuu fursad u helay inuu wax ka barto aabbihiis oo macallin ahaa oo xagga tajwiidka iyo aqoon kaleba lahaa oo socod badnaa, wuxuuna Sheekh Maxamed-Rashaad aabbihiis ku wehlin jiray safarrada, isagoo markaana ka sii baran jiray Quraanka.
Wuxuu Quraanka dhammeeyay 1960-meeyadii, wuxuuna markaas kaddib u xereystay magaalada Muqdisho qiyaastii 1967dii ama 1968dii. Wuxuu markaasi magaalada Muqdisho kula kulmay culimadii ka soo noqotay oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Maxamed Macallin Allaha u naxariisto iyo Shariif Cabdinuur.
Sheekh Maxamed-Rashaad wuxuu billowgii 1970-meeyadii billaabay inuu ka qeybqaato dacwada islaamka. Sanadkii 1976dii ayuu ka baxay dugsigii loo yaqaanay Jamaal C/naasir (Allahi). Wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee soo aada Sucuudiga, wuxuuna ku biiray jaamacadda Boqor Sucuud, wuxuuna ku biiray qeybta Sayniska. Wuxuu kaga baxay cilmiga biochemistry, wuxuuna kaga shaqeeyay dalka Sucuudiga.
Wuxuuna wax ka baran culimada waaweyn sida Sheekh Ibn Baaz.
Sanadkii 1986/87 ayuu u wareegay dalka Kanada, wuxuuna halkaas ka sii waday dacwada Islaamka. Wuxuu ahaa nin aad u aragti dheer oo aad u garanaya waaqica iyo nolosha lagu nool yahay dalka gudahiisa iyo dibeddiisa.
Wuxuu ku geeriyooday Dalka Sucuudiga, gaar ahaan Xaramka.
Previous: Maalintii ‘Ha-noolaato’
Next: Diiwaanka Gabayadii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan